Okufekethiswa kwekhompyutha KWAMAKHAMPANI → Isitolo esidayisa yonke impahla • Umkhiqizi • Umsabalalisi weP & M
Kungani kufanelekile ukusebenza nathi?
Siyinkampani egxile ekuthengisweni nasekusatshalalisweni kwezentengiso nezokugqoka. Asinikezi ukulebuli hhayi zokugqoka kuphela, kepha nezindwangu zisebenzisa indlela ukugqokwa kwamakhompyutha nokuphrinta isikrini.
Bhalisa inkampani yakho namuhla bese uthola isaphulelo esikhangayo! >>
Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe abanolwazi oluningi lweminyaka bazokujabulela ukusiza nezeluleko ekuklameni nasekukhetheni kwendlela yokubeka uphawu enhle kunazo zonke. Sinokuhlangenwe nakho okuningana kokuthunga, ukusika nokuklama izinhlangano zokukhangisa nemikhiqizo edumile.
Kusukela ngo-2003, besilokhu sihlinzeka ngezinsizakalo zokuthunga, ukusika, uku-ayina nokufaka amalebula. Sinegumbi lethu lokuthunga nepaki yemishini yokwenza izinto ezifekethisiwe. Sinemikhiqizo ehlukahlukene - imikhiqizo engaphezulu kuka-6000, izingubo zokusebenza nezingubo zokukhangisa ezivela kubakhiqizi abaziwayo ngamanani akhanga kakhulu. Ungathenga izinsizakalo zombili zokugqoka nokulebula (sicela uxhumane nathi kusengaphambili ukuthola isilinganiso esenziwe ngokwezifiso) kuwebhusayithi yethu www.pm.com.pl noma esitolo sethu kwa-Allegro "PRODUCER-BHP".
Igumbi lethu lokuthunga liyaqiniseka ukuthi imikhiqizo esiyikhiqizayo yenziwa ngezindwangu ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezinempahla esebenza kahle kanye nobuchwepheshe bokuphaka obuthuthuke kakhulu. Siyakwazi ukuhlangana nosonkontileka abafunwa kakhulu ngokusebenzisa imishini esinayo.
4. Ukuvumelana nezimo
Siyaguquguquka - sisabela ngokushesha ezidingweni zamakhasimende - kokubili ekukhiqizeni nasezindabeni ezisemthethweni. Sinikeza insizakalo yokufekethisa nokuphrinta kwesikrini kokubili kwimikhiqizo ethengwe esitolo sethu futhi ilethwe yikhasimende. Ngokwengeziwe, ngokubhalisa kuwebhusayithi yethu, lapho uthenga, ungathola isaphulelo esingeziwe kusuka ku-oda lesibili.
Siza ngokulandelana ngakunye, siqaphe ukuqaliswa kwaso kuzo zonke izigaba. Sakha ukuthembeka kwethu ekuxhumaneni okuvulekile namakhasimende nokunakekelwa okusebenzayo.
Okufekethisiwe kwekhompyutha - ukwenza ngezifiso okuhlonishwayo
Ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zokugqoka - kufaka nezingcweti zokugqoka - kuyingxenye yokunikezwa kwethu. Njengengxenye yokubambisana, amakhasimende ethu nawo athola amathuba okusebenzisa izinsizakalo eziningi ezingeziwe. Siphinde sisebenze ngamandla njengengqungquthela yokuhlanganisa izingane, okungenye yezizathu zethu ezinkulu zokuziqhenya.
Ukugqokwa kwekhompyutha iyindlela enhle kakhulu, nenhle futhi eqinile yokulebhula izingubo. Sisebenzisa izindawo ezikhethekile zobuchwepheshe, siyakwazi ukwenza noma iyiphi, noma iphethini eqondile kakhulu yanoma iliphi usayizi ezingutsheni zanoma yiluphi usayizi. Senza izinhlelo zokusebenza zokufekethisa ezinhlotsheni eziningi zokugqoka (amahembe wepolo, amahembe, izigqoko zomsebenzi, amabhilikosi, amathayi, amashidi. Futhi asikhawulelwe uhlobo lwezingubo - ifektri yethu inendawo yokuthunga neyokusika igumbi, ngakho-ke sinokulawula okuphelele kwekhwalithi yalokho esikulungiselela yona. Amathuba anikezwa isitolo sokufakelwa kwamakhompiyutha inzuzo enkulu yenkampani ekhonza imakethe yasePoland yezingubo zomsebenzi nokukhangisa.
- IPurina ProPlant
- 1imizuzu uJacobs
- Isitoreji Sokuqokwa
nezinye eziningi. Okuningi ongakubona kokwethu isitolo. Amaphrojekthi wethu wangaphambilini akhombisa ukuthi ngaphandle kwephrojekthi, siyakwazi ukwenza ama-oda ngokuthembekile nangesikhathi.
Ukuphrinta kwesikrini - ukumaka kokukhangisa
Ingenye yezindlela ezikhethwe kakhulu zokumaka, futhi esikwazi ukunikela ngazo. Le nsiza ayigcini ngokuqina kuphela futhi ihlinzeka ngekhwalithi enhle kakhulu, kodwa futhi ikhombisa kahle iphalethi yemibala yomdwebo ngamunye wesithombe. Ngenxa yobuchwepheshe bayo obusezingeni eliphezulu nokunemba, siyakwazi ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi engcono kakhulu, zombili ngokuya ngezingubo uqobo, kanye ne-logo efakwe kubo, imibhalo ebhalwe phansi noma imidwebo. Ngenxa yokuhambisana nezinsizakalo zethu, sinokulawula yonke inqubo yokwenza iphrojekthi eqediwe.
Ukulethwa okusheshayo umgomo wethu
Siletha ama-oda kumakhasimende kulo lonke elasePoland, nakwamanye amazwe. Sithumela izimpahla ikakhulukazi nge-DPD courier. Ama-oda amakhulu, ngesicelo sekhasimende, sihlela ukuthutha siye endaweni yokugcina izimpahla. Ngemiyalo ejwayelekile, siyakwazi ukubambisana ngamanani akhanga kakhulu. Kukhona futhi amathuba okuqoqwa komuntu siqu endlunkulu yethu eRawa Mazowiecka.